Ibhola ethwele abavelisi beSilayidi kunye nabathengisi | Yongeza
Ibhola ethatyathwa ifanitshala ifanelekile ifenitshala ebaluleke kakhulu ekuvulekeni okugudileyo okanye ukuvala idrowa. Udidi lwe-Addith olwesilayidi lubandakanya lonke uhlobo lweSilayidi esithathu kunye ne-Slides ethambileyo, isilayidi sokuvala esithambileyo, i-FOAL CLAIDS, i-FRGV Slide Slides Ngokuqinisekileyo sinokufumana into oyifunayo.
Yongeza ibhola yebhola ekhatywayo yenziwa ngentsimbi eqengqelekayo yentsimbi eqengqelekayo okanye intsimbi engenasiseko,I-Edren Gallivation ye-Craft ye-Craft, i-Wheater-subler engavisisani inyameko yokutsala kwaye ingaphumi lula.
Ukufaka isicelo seSost Slide Slides Slide kwaye sisebenzisa iibhola zentsimbi eqinileyo, ekwakukuqinileyo ukwenza i-trafti yangaphandle kunye neendlela zangaphakathi ze-Ining Road. Ngokuhlolwa okusemgangathweni ngokungqongqo, kunokutsalwa ngokulula ngaphezulu kwama-50 000, kwaye unokuxhasa izinto ezinobunzima obungaphantsi kwe-25 kg kunye nenxalenye yesilayidi sobuqili kunye ne-Bufvey.Uyilo lwenza ukuba kube nzima Ukutsala idrowa, kuya kuchaphazeleka kwi-buffer kancinci ukuvala idrowa ngexesha lokutyhala idraweli. Singanikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha imibala, kwaye ubukhulu beento ezahlukeneyo zinokubonelelwa ukuba zifezekise iimfuno zabathengi kumanqanaba ahlukeneyo. Isicelo sendawo-sithuba esihlukeneyo, silungele ukusetyenziswa kweedreyiswa ezinzima kakhulu ezinje ngeewadi, iincwadana, iitafile zebhedi, iidesika zekhompyuter, njl.